DEG DEG: Xildhibaanada Somaliland Kasoo Jeeda Oo Loo badinaayo In ay U codeeyaan Xasan Sheekhh + Shax Sir Culus Ku Qoranyahay Akhri | Warbaahinta Afgarad
Halkani waa : Warbaahinta Afgarad » Articles, News » DEG DEG: Xildhibaanada Somaliland Kasoo Jeeda Oo Loo badinaayo In ay U codeeyaan Xasan Sheekhh + Shax Sir Culus Ku Qoranyahay Akhri
Published On Monday, February 06, 2017 By admin. Under: Articles, News. Magaalada Muqdisho waxaa si xowlli ah uga socda ololaha doorashada madaxweynaha dowladda Federaalka iyadoona ammaanka si aad ah loo adkeeyay.
Malaayiin kamid ah shacabka kunool magaalada caasimadda ah ayaa la dhibaatoonaya kadeedka shisheeyahu sababay iyo waddooyinka xiran waxaana adag in muwaadinka caadiga ah uu gurigiisa ka baxo oo uu suuqyada kasoo tukaameysto ama ehelladiisa booqdo.
Waxaa si rasmi ah xalay Hoteellada waaweyn uga billaawday Ololaha doorashada oo ay sameynayaan musharixiinta xildoonka ah ee doonaya in mid walba uu majaraha u qabto dowladda Federaalka.
Shabakadda islaamiga SomaliMeMo ayaa heshay xog muhiim ah oo ku saabsan siyaasiga ugu dhow in uu markale hoggaanka uqabto dowladda Federaalka.
Ilo wareed Mas’uul ah oo diiday in magaciisa la adeegsado ayaa noo sheegay in xubnaha u ololaynaya Xasan Gurguurte ay ku guuleysteen in boqolaal xildhibaan ay ka saxiixaan in ay codka siiyaan Xasan Sheekh marka doorashadu si rasmi ah u bilaabato.
Saraakiil katirsan Ururka Damul Jadiid iyo siyaasiyiin ku fikir ah ayaa Gudaha ugalay illaa iyo 5 Hoteel oo ay deganyihiin xildhibaanada ugu badan ee labada aqal, xubnahan ayaa boorsooyin lacaga ah lagalay Hoteellada waxayna bilaabeen gorgortan siyaasadeed.
Wararka qaar ayaa sheegaya in xildhibaanada ballanta lalagalay ladhaariyay islamarkaana laga qortay Akoono Banki oo loogu shubi doono lacagta haddii ay codka siiyaan Xasan Sheekh Maxamuud.
Mid kamida siyaasiyiinta geed fadhigga u ah Xasan Sheekh ayaa SomaliMeMo u sheegay in saadaashu tahay in wax isbedel ah uusan ku imaan hoggaanka dowladda Federaalka.
Hoggaamiyaasha maamullada Galmudug, Koonfur galbeed, Jubbaland iyo Puntland ayaa xasan Gurguurte kula heshiiyay in ay codadka uga qaadayaan xildhibaanada deegaanadooda lagasoo doortay.
Ilo wareedku wuxuu sheegayaa in Xisbiga Damul Jadiid ay doorashada u qorsheeyeen lacag dhan 60 Milyan oo dollar badanaa lacagtan waxay ku bixi doontaa laaluushidda xildhibaanada iyo hoggaamiyaasha beelaha ee gadaal kaga naaban xildhibaanada ahna kuwa u dhaxeeya xubnaha ololaha xasan sheikh iyo xildhibaanada.
Suurta galnimo xooggan oo muujinaysa dib usoo laabashada Xasan Sheekh.
Marka loo kuurgalo mawaaqifta dabadhilifnimo ee Xasan Gurguurte, iyo taageerada uu ka heysto dowladda Itoobiya oo lagu daray dhaqaalaha xooggan ee uu ku bixiyay ololihiisa doorasho waxay suurtagal ka dhigayaan in Ninkaan markale dib ugusoo laabto maamulka Villa Somalia.
Tusaale ahaan Xassan ayaa Itoobiya umuujiyay meeshii ugu dambeysay ee kalsooni gelinta isagoo dhulka Somaligalbeed u hibeeyay islamarkaana sheegay in Itoobiya tahay mid aan marnaba looga maarmin arrimaha ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya, tagitaankiisii Jigjiga ayaa ka dhigneed mid taariikhi ah oo somaligalbeed si rasmi ah uraacsiinaysa dhanka Itoobiya taariikhdana madhicin in hoggaamiye soomaaliyeed tallaabtaasi qaado.
Arrinka labaad ee suurtagalka ka dhigaya dib usoo laabashada Xasan Sheekh ayaa ah lacagta malaayiinta dollar ah oo uu u huray dib usoo noqoshadiisa.
Sarkaal diiday in magaciisa la adeegsado ayaa SomaliMeMo siiyay shax loo qaateen ah oo banaanka soo dhigaysa sida xisbiga Damuladiid uloodin karo dhammaan musharixiinta latartamaysa.
1-Xasan Sheekh wuxuu gatay 80% xildhibaanada Baarlamaanka ee uu soo xulay maamulka Shariif Sakiin ee fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo.
2-Wuxuu heystaa codadka 90% xildhibaanada baarlamaanka ee lagasoo xulay dhanka maamulka Galmudug ee fadhigiisu yahay magaalada Cadaado.
3-Codadka xildhibaanada maamulka Jubbaland ayuu Xasan Sheekh ka heystaa 87%
4-Dhammaan codadka xildhibaanada ka imaanaya maamulka ‘Somaliland’ 100% ayaa la saadaalinayaa in uu heli doono Xasan Sheekh.
5-70% codadka xildhibaanada maamulka ‘Puntland’ ayaa la saadaaliyay in ay u dhici doonaan dhanka Xasan Gurguurte.
Wuxuu mugdi badan ku jiraa dhanka ay mari doonaan codadka xildhibaanada maamulka ‘HirShabelle’ oo loo badinayo in ay ku loolami doonaan sedax musharax oo kala ah Shariif Sheekh Axmed, C/qaadir Cosoble iyo Xassan Gurguurte waxaana loo badinayaa in Ururka Damul Jadiid uusan saameyn badan ku yeelan doonin xildhibaanada HirShabelle.
Fursadda guuleysashada waxaa sare usii qaadaya imaashiyaha C/wali Gaas ee magaalada Muqdisho waxayna ubadantahay in uu dhidibada u adkeeyo sidii xildhibaanada deegaanadiisa lagasoo doortay ay codadkooda usiin lahaayeen Xasan Sheekh.
Waxaa jira balanqaadyo dhanka jagooyinka ah oo uu Gurguurte u fidiyay Shariif Sakiin, Axmed Madoobe iyo Cabdi Wali Gaas, Haddii Xasan guuleysto waxaa lafilayaa in wasiirka maaliyadda loo magacaabo wiil uu dhalay Shariif Sakiin halka wasiirka difaaca laga dhigi doono Cabdi Rashiid Xidig oo ay isku dhowyihiin Axmed Madoobe.
Cabdi Wali Gaas ayaa isna ballanqaadyo gaar ah ka heysta Xasan Sheekh waxaana la ogaa kaalintii Gaas uu ka qaatay Doorashada Xasan Gurguurte sanaddii 2012.
Sidaas oo ay tahay oo loo badinayo in Damul Jadiid dib usoo laabto hadane waxaa jira loollan xooggan oo ay wadaan musharixiinta kasoo horjeedda iyo go’aannada kama dambeysta ah Ee DF-ka ah oo gacanta ugu jira dowladaha shisheeye waxaana shaqeyn doona rabitaanka waxa loogu yeero beesha caalamka.
isbedellada kale ee lama filaanka ah ee dhici kara ayaa ah in xildhibaanada laaluush qaatayaasha ah ay lama cantuugaan lacago kala duwan oo uga yimaad musharixiinta taas oo isku dheeli tirnaan la’aan keeni karta.
Si walba oo ay ahaato isha ayaa lagu wada hayaa doorashooyinka Hoggaanka DF-ka, 99% shacabka kunool magaalada Muqdisho ayaa taageersan in uusan talada kusoo laaban Ururka Damul Jadiid oo dhaqaalihii dalka ugacan geliyay dowlado shisheeye islamarkaana shaqa la’aan iyo boob hantiyadeed ku dhaqaaqay.
FG: Xogtan ma ahan mid 100% lagu kalsoonaan karo.
« War Deg Deg ah: Mooshin Xilka Lagaga Xayuubinaayo Maayirka Magaalada Bali-gubadle Oo La Qorsheynaayo Dhawaan
LIVE: Si Toos ah Halkan Uga Daawo Doorashada Madaxweynaha Ee Somaaliya (LIVE) »